Kedu ihe mere mmemme ahụ ga-eji gaa n'ihu - Thrilltalk.com
Home/Kpamkpam/Gịnị mere fairs kwesịrị ịga n'ihu
Gịnị mere fairs kwesịrị ịga n'ihu
0 27 Ejiri 2 gụọ
A ga-eme mmemme niile na mpaghara Central na West Brabant ruo mgbe opekata mpe 1 Nọvemba. Na-agbasasị na mba ahụ, otu ihe egwuregwu na-ewere ọnọdụ na obodo dị nso. Nke a ọ bụ nsonaazụ nke ndị isi obodo na-atụ ụjọ ma ọ bụ nke a bụ ihe ọzọ? N'isiokwu a anyị ga-akọwa ihe kpatara eji aga n'ihu.
Egwuregwu ahụ bụ ntụrụndụ na-adịghị ize ndụ
Na Julaị ntụrụndụ mbụ kemgbe mkpọchi akpọrọ bụ eziokwu, skoo bụ nke Moergestel. Site n'oge ahụ gaa n'ihu, ndị ahịa ahụ ji nwayọọ nwayọọ malite ọzọ na ndị ọrụ ahụ nwere olileanya na ha ga-enwe ike ịkwụsị mmebi maka afọ a. N’oge na-adịghị anya, mbupute ndị mbụ sitere n’obodo dị iche iche na ọnụ ọgụgụ nke ngosi ndị na-eme bụ pasent nke ọnụọgụ nke afọ nkịtị. Out nweela ntiwapụ nke Corona mgbe ndị agha gasịrị? Mbanụ. Nrụgide IC arịala elu kemgbe ntiwapụ ahụ? Ee e.
De ogige ntụrụndụ kwere ka imeghe ya na ọ dighi bụ isi mmalite nke mmeru. Efteling na-enye ohere ihe dịka ndị ọbịa 15.000 ịbanye ogige ntụrụndụ n'otu oge, kwa ụbọchị. On a-enwe kwa izu bụ sloppy 105.000 ọbịa si Netherlands, Belgium na Germany. Ndị a bụ ndị anya chiri anya site na ihu igwe gbara agba, ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume nrịgo 1,5 mita iji kwe nkwa 100%. Gbakwunye n'eziokwu ahụ bụ na Efteling nwekwara ebe nkiri dị "n'ime ụlọ".
N'ihe ruru ihe ruru ọkara nde mmadụ kwa ọnwa, nke ahụ anaghị ebute ntiwapụ. N'ụzọ ziri ezi ka ogige ntụrụndụ yabụ ịnwere ike imeghe oghe ma nata ndị ọbịa.
Na onu ogugu enwere oria Na-elegide anya mgbe emechara Tilburg n'ihi na ya na ọtụtụ mmadụ ga-enwerịrị ntiwapụ ọkà mmụta sayensị kwuru na Ab Oosterhaus kwuru. Ọrịa ahụ emeghị.
De ndị ngosi Ihe omume ndi gara n'ihu emeela nke ọma. Enwere mgbapụta disinfection na mma ọ bụla, enwere jingles iji debe mita 1,5 anya, ndị ọbịa dị ole na ole na saịtị ahụ, enwere ndị nche na ndị mmanye ka ha lelee ebe niile. emepe awa na-adịkarị mkpụmkpụ ...
Kwado ndị gosipụtara
Mayors nke Netherlands maara nke ọma ihe ga-esi na nkagbu. Onye ọrụ ahụ nwere ike ghara inwe ego n'oge ahụ n'ihi na a na-eme ka ngosi ahụ pere mpe ma pere mpe, yabụ enweghị ohere ọzọ. Nwere ike ịhazi ndokwa ọzọ na obodo gị mgbe nsogbu a gasịrị. Ma ọ bụrụ na otu onye ọrụ ahụ enweghị ego n'ihi na ọ nweghị ike iwepụta ego ga-ezuru ya iji mee ka ụlọ ọrụ ya na-aga. Ọ bụrụ na obodo niile na-eme nke a, n'oge na-adịghị anya, agaghịzi adị na Netherlands.
Kedu ka ị ga - esi onyeisi obodo na-akwado ndị na-arụ ọrụ na mbara ala?
Hazie ihe ngosi dị mma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa na saịtị na-abụghị etiti
Nyeghachi ego na ego ụgbọ ala
Chee echiche n’ime azịza
Kwado ndị ọrụ
Mịnịsta nke Ikpe Ziri Ezi na Nche Ferd Grapperhaus bụ onwe ya ihe akaebe dị ndụ na-egosi na enwere ike ịlele mita 1,5 mgbe ụfọdụ. Ozi anyị bụ gị, onyeisi obodo, Ya mere, ọ bụghị oke siri ike maka ndị ọrụ. Ọ bụrụ na ndị ọbịa esoghị iwu ndị a, gwa ndị ọbịa a ma ọ bụ wepu ha na saịtị ahụ. Ọ bụrụ na obere obere achọghị ime ihe a, ọ dịghị mma onye ọrụ na ndị ọbịa na-eme ike ha niile, nri?
Dịka e kwuru na mbụ, ịkagbu ihe ngosi nwere nnukwu nsogbu. Ndị bi na-enweghị ntụrụndụ n'ụlọ ma ndị ọrụ na-agbasi mbọ ike ịhapụ azụmahịa ha. Enweghị ihe akaebe na ngosi ngosi na-eyi ahụike ahụike ọha egwu. Enweghị ihe akaebe na ngosi ngosi na-abawanye ohere nke corona, n'eziokwu, ọrịa ndị na-adị adị na-abụkarị na onwe oghere.
Bịa na ndị isi obodo. Nyere ndi ezi omume aka site na nsogbu a!
ụlọ ọrụ ndị ọbịa Onyeisi obodo okpueze Na-agbatị ndị ọrụ Kpamkpam nha aku set Nederland Ugochukwu
Otutu Dimension Coaster maka Movie Park Germany
Ede nwere ihe ịtụnanya n’oge ezumike ezinụlọ ‘jiri obi ụtọ mee ya